Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်တိုက်ပွဲသတင်းများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်တိုက်ပွဲသတင်းများ
at 1/27/2018 11:57:00 AM
ကချင်ပြည်အတွင်းတိုက်ပွဲများမှာ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ထပ်မံပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်များမှာမိမိတို့လူမျိုးများဒေသ၌တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနေခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့၌ ဗမာစစ်တပ်သည်ဂျက်တိုက်လေယာဉ် (၃) စီးဖြင့် KIA တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ၊တပ်ရင်း (၁၄)ဌာနချုပ်အားနှစ်ကြိ်မ်တိုင်တိုင်လာရောက်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် တပ်ရင်း (၁၂) ဌာနချုပ်အတွင်းရှိ ဘားတိုက် (၄) လုံးအပါအဝင် အဆောက်အအုံအချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိမိတို့ရဲဘော်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဗုံးအများစုမှာ တပ်ရင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူနေအိမ်များအားထိမှန်ကျရောက်ခဲ့သောကြောင့် အရပ်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ထို့အတူ ပယင်းတူးဖော်လျှက်ရှိသော "မှော်ကျေးရွာ"အတွင်းသို့လည်း ဂျက်တိုက်လေယာဉ်(၃) စီးဖြင့်နှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင်လာရောက်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အပြင် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပေါ်မှစစ်သေနတ်များဖြင့်လည်း အရပ်သားပြည်သူများကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အရပ်သားလူနေအိမ်နှင့် တဲတန်း(၅) လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြရပြီးမှော်အတွင်းပယင်းတူးဖော်လျှက်ရှိကြသူများထဲမှ ဒေသခံကချင်လူမျိုးအချို့၊ဗမာတိုင်းရင်းသားအချို့ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရသူအချို့အား တနိုင်း၊ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ဆေးကုသမှုခံယူရန်ပို့ဆောင်ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
(က) ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား ၊ အသက် (၂၇) နှစ်၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့၊ (သေဆုံး)
(ခ) ဒေါ်ဆိုင်းရာ၊ ကချင်လူမျိုး၊ အသက်(၃၁) နှစ်၊ (သေဆုံး) (လိပ်စာစုံစမ်းဆဲ)
(က) ဒေါ်တိန်းနမ်၊ ကချင်လူမျိုး၊ အသက် (၅၀) နှစ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကျောကုန်းပေါ်ဗုံးစထိမှန်။
(ခ) မတိန်းစေး၊ ကချင်လူမျိုး၊ အသက် (၁၇) နှစ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ လက်မောင်းဒဏ်ရာရရှိ။
(ဂ) မဂျာနူး ၊ ကချင်လူမျိုး၊ (ကလေး) အသက် (၂) နှစ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဘယ်ဖက်လက်ဖဝါးဒဏ်ရာရရှိ။
(ဃ) မောင်မင်းဟိန်းထွန်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား၊ အသက်(၂၈) နှစ်၊ သူဋ္ဌေးကုန်း၊နမ္မတီးမြို့၊ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရရှိ။
(င) မောင်ကျော်အောင်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား၊ အသက် (၂၈) နှစ်၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့၊ နားထင်ဒဏ်ရာရရှိ။ နားလေးလျှက်ရှိ။
အထက်ပါစာရင်းများမှာ မိမိတို့သိရှိထားသောစာရင်းများသာဖြစ်ပြီး အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်း ထပ်မံရှိသေးကြောင်းသိရှိရသည်။ ထပ်မံသိရှိရသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ နှင့် သေဆုံးသူများစာရင်းများရှိပါက ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။
ဗမာစစ်တပ်သည် ယခင်အချိန်များ၌ ဗမာမဟုတ်သူများကိုအဓိကထားဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားများကိုပါပစ်မှတ်ထားဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဗမာစစ်တပ်၏ ဤကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များမှာလူမဆန်သော၊ ရက်စက်ယုတ်မာသောလုပ်ရပ်များသာဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်မီးအား တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ပိုမို၍တောက်လောက်လာစေရန်နှင့် တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုအားအဓိကပြုလုပ်နေသောအဖွဲ့အစည်းမှာ အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်သာဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ (၁၆) ရက်နေ့၌လည်းရခိုင်ပြည်၊မြောက်ဦးမြို့တွင်ဗမာအစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့မှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် ရခိုင်လူငယ်ဆယ်ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြရပြီးဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သေနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရသူများကိုထပ်မံအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးပြီးအကျဉ်းချထားမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Photo Credit: မူရင်းပိုင်ရှင်များနှင့်ပေးပို့သူ။
Myanmar Burmese Troops Used Chemical Weapons in Ka...
Breaking News: Local Reports Say Burmese Army Troo...
US De Shawng Du ai Salang Z. Brang Seng hte San Ht...
The Biography of Du Kaba Lahpai Naw Seng
Howa Duwa Maran Hkun Hpung hte Du Kaba Lahpai Naw ...
1953 ning Jingphaw Mung Nhtoi htaq Jinghpaw Mung N...
Memorandum expressing the wishes of the Kachin Peo...
“Memorandum expressing the wishes of the Kachin Pe...